ကိုဗစ်ကာလ မှာ ပေါ်လာတဲ့ ရန်ကုန်မြို့က မြေအောက်လောကတစ်ခု (ဒီကိစ္စတွေ ကတော့ ဖြစ်မှာပါပဲ) – Ever Best
ကိုဗစ်ကာလ မှာ ပေါ်လာတဲ့ ရန်ကုန်မြို့က မြေအောက်လောကတစ်ခု (ဒီကိစ္စတွေ ကတော့ ဖြစ်မှာပါပဲ)
ကိုဗစ်ကာလမှာ ပေါ်လာတဲ့ ရန်ကုန်မြို့က မြေအောက်လောကတစ်ခု (ဒီကိစ္စတွေ ကတော့ ဖြစ်မှာပါပဲ)
မြို့ရန်ကုန် ကကြိုးရယ်စုံပါပေ့.. မနက်က လိုတာလေး ဝယ်ရအောင် စျေးဖက် ထွက်ခဲ့တယ်.. ညက လိုက်အော်ထားလို့နဲ့တူပါရဲ့ လမ်းဘေးစျေးသည် တစ်သည်မှမရှိ လမ်းထိပ်ရောက်တော့.. ကျနော့် ရှေ့ကသွားနေတဲ့ လူကမလုံမလဲ နဲ့ ဘေးဘီကြည့်ရင်း.. လမ်းထောင့်မှာရပ်နေတဲ့ အိန္ဒိယသား တစ်ယောက် နားကပ်သွားပြီး တိုးတိုး တိုးတိုးပြောနေတယ်.. ပြီးတော့(ပိုက်ဆံလို့ ထင်တာဘဲ) ကပ်ပေးလိုက်တယ်.. အိန္ဒိယသား(မုတ်ဆိတ်နဲ့)က ဖုန်းထုတ်ပြီး ဆက်တယ် သူ့ကိုလည်း ခဏစောင့်ဖို့ ခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့ပြတယ်
ဟား ဟ.. ဒါ.. သေချာတယ်.. ကိုယ်လည်း ရန်ကုန်မှာမွေးတဲ့သူဘဲ.. ပေါက်တာပေါ့ ဒီလို အထာမျိုးတွေကို.. ကိုယ်ကလည်း ဒါမျိုးဆို သိပ်သိချင်တဲ့ ကောင်.. ဖုန်းလာသလိုလို ပြောသလိုလို နဲ့ မယောင်မလည်ရပ်လိုက်ရင်း အခြေအနေကို အကဲခတ်နေလိုက်တယ်..
ရွှီ.. ကနဲ လေချွန်သံ တစ်ချက် အပြီးမှာ နောက်က တိုက်လွှာပေါ်က အထုတ်လေး တစ်ထုတ်ကျလာတယ် မုတ်ဆိတ်က လှမ်းဖမ်းလိုက်ပြီး ခုနက လူကိုပေးတယ်.. ဟိုလူက ရတာနဲ့ ချာကနဲ လှည့်လစ်သွားတယ်.. ဟား.. လုပ်လှချည့်လား ကိုယ့်အပိုင်ထဲမှာတောင် ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေပါ့လား
ငါသိတယ်နော်ဆိုတဲ့ အထာနဲ့ မုတ်ဆိတ်ကို ရှိုးလိုက်တယ်.. အိန္ဒိယသားကလည်း နပ်တယ် ကျနော့်ကိုလှမ်းပြုံးပြတယ်.. ဖုန်းနံပါတ်တခု ရေးထားတဲ့ ကတ်ပြားလေးတခု လှမ်းပေးရင်း တီးတိုး မေးတယ် အကို.. လိုရင်လှမ်းမှာလို့ရအောင်.. အခုရော ယူသွားဦးမှာလား? အခုချက်ခြင်း ရမှာလား..? ကြာမှာလား..? အဲ့ မုတ်ဆိတ် ကပ်ပြောတယ် (၅) မိနစ်လောက် ပါဘဲ အကို အပေါ်ထပ်မှာ ဆက်တိုက် ယာနေပါတယ်.. အစ်ကိုက ဘာနဲ့ စားမှာလဲ နိုင်တီတူးနဲ့လား ဘုရင်မနဲ့လား.. ဘယ်လောက်ဖိုးလဲ.. တဲ့ (၅၂၈)
မြို့ရန်ကုန် ကကြိုးရယ်စုံပါပေ့.. မနက်က လိုတာလေး ဝယ်ရအောင် ဈေးဖက် ထွက်ခဲ့တယ်.. ညက လိုက်အော်ထားလို့နဲ့တူပါရဲ့ လမ်းဘေးဈေးသည် တစ်သည်မှမရှိ..
လမ်းထိပ်ရောက်တော့.. ကျနော့ ရှေ့ကသွားနေတဲ့ လူက မလုံမလဲ နဲ့ ဘေးဘီကြည့်ရင်း.. လမ်းထောင့်မှာရပ်နေတဲ့ အိန္ဒိယသား တယောက် နားကပ်သွားပြီး တိုးတိုး တိုးတိုးပြောတယ်.. ပြီးတော့(ပိုက်ဆံလို့ ထင်တာဘဲ) ကပ်ပေးလိုက်တယ်.. အိန္ဒိယသား(မုတ်ဆိတ်နဲ့)က ဖုန်းထုတ်ပြီး ဆက်တယ် သူ့ကိုလည်း ခဏစောင့်ဖို့ ခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့ပြတယ်..
ရွှီ.. ကနဲ လေချွန်သံ တချက် အပြီးမှာ နောက်ကတိုက် သုံးထပ်ပေါ်က အထုတ်လေး တစ်ထုတ်ကျလာတယ် မုတ်ဆိတ်က လှမ်းဖမ်းလိုက်ပြီး ခုနက လူကိုပေးတယ်.. ဟိုလူက ရတာနဲ့ ချာကနဲလှည့် လစ်သွားတယ်.. ဟား.. လုပ်လှချည့်လား ကိုယ့်အပိုင်ထဲ မှာတောင် ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေပါ့လား ဟ ဟ ဟ ..
ငါသိတယ်နော် ဆိုတဲ့ အထာ နဲ့ မုတ်ဆိတ်ကို ရှိုးလိုက်တယ်.. အိန္ဒိယသား ကလည်း နပ်တယ် ကျနော့ကိုလှမ်းပြုံးပြတယ်.. ဖုန်းနံပါတ်တခု ရေးထားတဲ့ ကတ်ပြားလေးတခု လှမ်းပေးရင်း တီးတိုး မေးတယ် အကို.. လိုရင်လှမ်းမှာလို့ရအောင်.. အခုရော ယူသွားဦးမှာလား? အခုချက်ခြင်း ရမှာလား..? ကြာမှာလား..? အဲ့ မုတ်ဆိတ်ကပ်ပြောတယ် (၅) မိနစ်လောက်ပါဘဲအစ်ကို အပေါ်ထပ်မှာ ဆက်တိုက်ယာနေပါတယ်.. အကိုက ဘာနဲ့စားမှာလဲ (92)နဲ့လား ဘုရင်မနဲ့လား.. ဘယ်လောက်ဖိုးလဲ.. တဲ့ (၅၂၈)
Previous post ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ အထာကျကျ Tiktok ဆော့ကစားနေတဲ့ ဖူးပွင့်သခင်(ဗွီဒီယို)
Next post ကိုကိုတွေ မြင်လားလို့ ရင်ခုန်သံတွေ မြန်အောင်ပြလိုက်တဲ့ သဇင်ဦး ရဲ့ ဗီဒီယို